WAR DEG DEG AH:Qaar kamid ah wadooyinka magaalada Laascaanood oo la xidhay & Cabsi xoogan oo timid kadib markii…. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH:Qaar kamid ah wadooyinka magaalada Laascaanood oo la xidhay & Cabsi xoogan oo timid kadib markii….
June 30, 2018 Puntland PL
TUKARAQ(P-TIMES)- Wararka haatan aanu ka helayno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Somaliland ay dhamaanba xidheen wadooyinka soo gala saldhigyadii dhawaan weerarka lagu qaaday.
Xidhiska wadooyinkani ayaa loo aanaynayaa in mar kale ay dhici karaan weerar lagu qaado ciidamada Somaliland, waxaana saraakiisha ciidamada Somaliland ay amar ku bixiyeen in gabi ahaanba la xidho wadooyinka gala saldhigyadaasi.
Qaar kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay Puntlandtimes.com ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan xidhista wadooyinkaasi oo aad u muhiim ah, maadaama ay qayb laxaad leh ka qaadan jireen isu socodka gaadiidka iyo dadka.
Dadka guryahoodu ka ag dhow yihiin saldhigyada ciidamada Somaliland ee magaalada Laascaanood ayaa lagu amray in ay iskaga guuraan goobahaasi amaba ay xaroodaan xili hore si aysan waxyeelo u gaadhsiin ciidamada Jeegaanta ee baqsan.